कहिले हुन्छ नेपाल जापान जस्तै डाक्टर इवामूरा ? :: NepalPlus
कहिले हुन्छ नेपाल जापान जस्तै डाक्टर इवामूरा ?
श्रीधर प्रसाद घिमिरे / पाल्पा२०७७ कार्तिक २७ गते १५:१४
श्रीधर प्रसाद घिमिरे
पाल्पा तानसेन डाँडामा रहेको वस्ती भएकोले नजिक पानीका मूल र जरुवा हुने भएन । धेरै वर्ष अघि भुल्केबाट खानेपानी तानेर तानसेनवासीलाई पानीको खाँचो आजसम्म पनि टारिँदै आएको छ । भुल्केको खानेपानी योजनाको परिकल्पनादेखि पानी झार्ने काम गर्नमा एकजना जापानिज डाक्टरको ठूलो देन छ । उनको नाम डाक्टर इवामूरा हो ।
आजभन्दा ५० वर्ष अघिसम्म पाल्पाका गाउँगाउँमा इवामूरा समाजसेवी काम लिएर पुग्थे । दोश्रो विश्वयुद्धका बेला बममा प्रयोग गरिएको रसायनका कारण निसन्तान बनेका यी डाक्टरले नेपालमा सडक वालवालिकालाई अभिभावकत्व पनि दिएका थिए । उनीसँग भएका केहि कुरा मेरो दिमागमा घुमिरहेका छन् । नेपालको फोहोरी राजनीति, देशको विकास भन्दापनि खाली आफ्नै खल्ती भर्ने लोभी नेताहरुको ताँती देख्दा पटक पटक यिनै इवामूराको सम्झना हुन्छ ।
०२९ सालको ठण्डीको बिहान दमकडामा चिया पिउँदै इवामूरासँग मैले यौटा प्रश्न सोधेको थिएँ । त्यसबेला जापान निकै टाढाको देश थियो । विदेशीहरु अर्कै ग्रहबाट आएका झैं लाग्थे धेरैलाई । अहिले नेपाली युवायुवतीहरु पनि देश देशावर घुमेका छन् । केटाकेटीका कारण बाउ आमा पनि अमेरिका, अष्टेलिया पुगेर त्यहाँको विकास देख्ने मौका पाएका छन् । उसबेला हामीले विदेशीका कुरा सुन्थ्यौं । डाक्टर इवामूरासँग मैले सोधेको थिएँ, नेपाल जापान जस्तै कहिले हुन्छ डाक्टर इवामूरा ? इवामूराले टाउको हल्लाए । नकारात्मक अर्थ दिनेगरी ।
‘५० वर्षमा त होला नि ?’ मैले फेरि सोधें । उनले फेरि उसैगरी मुन्टो हल्लाए ।
‘१०० वर्षमा त पक्कै फेरिन्छ ।’ फेरि उनले उसैगरी मुन्टो हल्लाए ।
‘कति वर्ष लाग्छ त नेपाल बन्न ?’ मैले तेश्रोपटक सोधेपछि उनले भने ‘अरुलाई कज्याउने र अह्राउने तपाईँहरुको बानी नगएसम्म नेपाल बन्दैन । मेरो ५० किलोको झोला म पसिना काढदै बोकेर हिँडेको हुन्छु, नेपालीहरुलाई २० किलोको झोला बोक्न लाज लाग्छ । अरुलाई बोकाउँछन् ।’
र, अर्को कुरा सुन्नुस् ‘नेपालमा राष्टिय स्तरको राजनीति गर्नेलाई नै देशको माया छैन । जब देश बनाउँछु भनेर बोल्दै हिँड्ने र देशको ढुकुटीको साँचो लिएको मान्छेलाई नै देशको माया छैन भने देश कसरी बन्छ ?’
चियाको सर्को तान्दै इवामूराले कुराको पोको खोले, ‘म झण्डै पौने घण्टा लगाएर स्कूल जान्थें । खुट्टामा जुत्ता हुन्थेन । चप्पल लगाएर चीसो ठिरेटोमा हिँडेरै पढेको हुँ मैले । मेरा काका लण्डनमा डाक्टरी पढ्थे । हजुरबाउले उनैलाई पैसा पठाउँदै ठिक्क हुन्थ्यो । काकाको कारण हामीले पाउने सुविधा पनि कट्टी भयो ।’
उनले सुनाउँदै गए – पछि काकाहरु देश फर्के पढेर । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल सबैमा देशभक्तिको भाव यसरी उर्लिएको थियो कि उनीहरु आफ्नो ज्ञान सिप देशमै लगाउन चाहन्थे । अमेरिकीहरुले धुलोपिठो पारेको जापानलाई फेरि उठाउन
चाहन्थे । संगठित भैसकेपछि उनीहरुले राजदरबारमा जापानको मुहार फेर्न दक्ष प्राविधिकहरुको सल्लाह लेखेर दिए । दरबारका हुक्के चम्चेहरुले राजासम्म यो कुरो पुग्नै दिएनन् । उल्टो राजगद्दीलाई खतरा पुग्ने गलत कुरा सुनाए । राजाले वास्ता नगरेपछि उनीहरुले फेरि बुलन्द आवाजका साथ आफ्नो योजना सुनाए राजालाई सोझै । राजाले पढे । कुरो त ठिकै लाग्यो । अनि दक्ष प्राविधिकहरुको योजनाले देश धमाधम कायापलट हुन थाल्यो ।
गाउँ गाउँमा स्कूल खुले । अस्पताल खुले । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेर उद्योग धन्दा र कलकारखाना स्थापना गरियो । बाटा चौडा र फराकिलो बनाइयो । रेल कुद्न थाल्यो अझ तिब्र वेगमा । जनतालाई कसरी सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा योजनाहरु बने । त्यसपछि बल्ल जापान युद्धको भयावह अतितबाट ब्यूँझियो । जबसम्म सरकारले विशेषज्ञका कुरा सुन्दैन, जबसम्म योजना बनाउने र लागू गर्ने मानिसहरुमा आफू मात्रै धनी र सम्पन्न हुने लालच रहिरहन्छ, लेखेर राख्नुस् त्यो देश कहिल्यै बन्दैन ।
म स्वयं कमरेड पुष्पलालको मार्क्सवादी स्कूलबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ । हाइस्कूलको प्रधानाध्यापक, कलेजको अध्यापक भएर निवृत्त भएँ । नेपालको कायापलट फेर्नुछ भने वामपन्थीहरुलाई सत्तामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराले सधैंभरी वाम आन्दोलनको सहयोग र समर्थनमा लाग्न प्रेरित गरिरह्यो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने शासनकालले स्वर्णिम युग वामपन्थीबाट नै सम्भव छ भन्ने देखायो । गाउँगाउँमा उत्साहको लहर आयो ।
अहिले झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट भनिएको सरकार हेर्छु । त्यसै त्यसै विरक्त लागेर आउँछ । सबका मुख बजेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र छुराजस्ता मुखले सुन्नै नसकिने गाली गरेको पत्रपत्रिकामा हेर्न विवश छु । पार्टीमा त्यत्रो योगदान र बलिदान दिएका दुई अध्यक्षहरुको भाषा, यौटाले फटाहा भन्छ । अर्कोले महाफटाहा भन्छ । यो जगहँसाइले म जस्ता धेरै शुभचिन्तकहरुको मन दुखेको छ । यसबेला त देशैभरीका पार्टीका कार्यकर्ताहरुको सशक्त टिम बनाएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने होइन र ?
चीनमा माओले बेयरफूट डाक्टरको जुन अवधारणा ल्याएका थिए, त्यसैगरी । ख्वै कहाँ छ नेपालको विकास गर्ने योजना ? कहाँ छ देश कायापलट गर्ने अवधारणा ?
कोरोनाले अर्थतन्त्र डामाडोल छ । पार्टी भित्र गूट उपगूटको लडाइँ छ । व्यक्गित रुपमा कुनै आशा नराख्ने हामी जस्ता जमिनमा शुभचिन्तकहरुको विश्वासमा नेतृत्वले यसरी खेलवाड गर्न हुन्छ ?
अध्यक्ष वैठक बस्न नमान्ने। अरुलाई वैठक नबसी नहुने । कम्युनिष्ट पार्टीको चेयरम्यानले त वैठक फेस गरेर आफ्ना कुरा दह्रोसँग राखे पार्टीभित्र अल्पमत भएर के हुन्छ ? समर्थनमा जनता सडकमा उत्रिन्छ । अरु गूट उपगूटका नेता पनि जनतासँगै जानुपर्ने होला । यदि प्रधानमन्त्रीले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए भने समर्थन नगरेर सुख्खले ? आफ्ना वरिपरिका भ्रष्ट मानिसहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरे कसले समर्थन गर्दैन ?
उहि जापानीज डाक्टरले भने जस्तै देशको साँचो लिनेलाई नै देशको माया नभएपछि हामी जनताले हेर्ने त रमिता मात्रै त रहेछ । यो वा त्यो नेता भन्ने कुरै भएन ।
कोरोना संक्रमणको महामारीले मै हुँ भन्ने देशहरुलाई त सकसमा पारे भने नेपाल जस्तो विपन्न देशका लागि यो त्यति सजिलो कुरा होइन । तर ख्वै त विशेषज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारले काम गरेको ?
ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमा ख्वै त स्वास्थ्यकर्मी ? नेताहरुसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । तर उनीहरु स्वास्थ्यका विशेषज्ञ त होइनन् नि । एकसे एक काबिल डाक्टरहरु छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिएर नेताहरु जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ भएपछि हुने भद्रगोल नै हो । अहिले भएको पनि त्यहि हो । बोलेर मात्रै कहाँ हुन्छ ? अस्पतालले निशुल्क कोरोना उपचार नगर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिनुपर्ने अवस्था आयो । कम्युनिष्ट भनिएको सरकारले यस्तो जनता विरोधी निर्णय गर्न हुन्छ ?
हामीकहाँ त सबै मानिस सबै कुराको विशेषज्ञ हुने चलन छ । माथिदेखि तलसम्म । तथापि देश जहाँको त्यहिँ छ । अझ ओरालो लाग्दोछ । समयले दिएको यो ठूलो अवसरलाई हाम्रा नेताहरुले त्यसै खेर फाले । फालिरहेकाछन् । यसको मूल्य दह्रै चुकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भविष्यमा । डाक्टर इवामूरासँग अहिले भेट हुन पाए के भन्दा हुन् ?
(पंचायतकालमा नेकपा मार्क्सवादी पाल्पाको जिल्ला कमिटी, शिक्षक संगठनमा रहेर काम गरेका घिमिरे पाल्पा मदनपोखरा दमकडाको श्री दमकडा उच्च माविका पूर्व प्रधानअध्यापक तथा माण्डव्य बहुमुखी क्याम्पसका निवृत्त प्राध्यापक हुन् ।)